Polycarbonate | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atụmatụ nke polycarbonate greenhouses, ịgagharị nhọrọ maka ịzụta
Polycarbonate greenhouses enwewo ọganihu n'etiti ndị nọ n'oge okpomọkụ, ntinye ha anaghị etinye oge na mgbalị dị ukwuu, ego a na-efu adịghịkwa mma. Tụkwasị na nke ahụ, ahịa nwere ọtụtụ nnukwute ụlọ nsị, nke na-enye gị ohere ịhọrọ nhọrọ kachasị mma maka gị. Nkọwa Naanị Nkọwapụta nke polycarbonate na-eru arọ dị arọ snow, ọ naghị esiri ike ịwụnye ma nwee oke dị elu nke ịdabere na ya.
Ihe na nkwenye nke ụdị ntọala dị iche iche maka griin ha
Polycarbonate greenhouses anọwo ogologo oge kwadoro ha maka àgwà ha. Ihe ndabere maka owuwu ha nwere ọdịiche dị na ihe ndị e dere na ya, na-efu ụlọ na mma. Otú ọ dị, ọ naghị adị mfe ịhọrọ nke ntọala kacha mma maka ntinye nke polycarbonate greenhouses. Ya mere, ọ bara uru ịchọgharị ụdị ntọala ma họrọ nke na-adọrọ gị mma.
Ihe gbasara ịbịpụta polycarbonate na ígwè dị na ya bụ maka nchegbu ọ bụghị naanị ndị na-ewu ụlọ ọrụ, kamakwa ndị ọrụ ubi, n'ihi na ọ bụ site na ihe a ka ị nwere ike ime ka a na-ere akwụkwọ ndụ gị. N'ezie, ị ga-enwe ike nweta nsonaazụ dị mma ma ọ bụrụ na ị mara tupu oge niile gbasara ọrụ niile dị mkpa, mana site na nke a, anyị ga-enyere gị aka ugbu a.
Anyị na-eto mkpụrụ siwi n'ụlọ
Ụdị fatịlaịza kasị mma maka mkpụrụ osisi vine kachasị
Esi esi tufuo whitefly n'elu okooko osisi n'ime: atụmatụ nke ọgụ megide ọrịa